Amathiphu wokufaka i-wax ngaphandle kobuhlungu | Amadoda aSitayela
Amathiphu wokufaka i-wax okungenabuhlungu
Kungaba kwenzelwa inhlanzeko, ukunethezeka noma ukuzizwa uthandeka ngokwengeziwe, amadoda amaningi ayakhuthazwa ukuthi anwebe futhi asuse izinwele ezingafuneki kunoma iyiphi ingxenye yomzimba. Noma ngabe yisiphi isizathu sakho, noma indlela yakho (insimbi, i-wax efudumele noma eshisayo, udlawana ...), qaphela lawa macebiso alandelayo ukuthi ukugcwala kungabi ukuhlukunyezwa.
Amacebo amancane okufaka i-wax ngaphandle kobuhlungu
Ngaphambi kokufaka i-waxing (ikakhulukazi uma ukhetha i-wax), geza indawo ezotshiswa ngensipho namanzi. Zikhandle i-ice cube ne-hydrogen peroxide encane ezungeze indawo futhi ngaleyo ndlela uzokwazi ukushukumisa isikhumba futhi ugweme ukucasuka okulandelayo. Kubalulekile ukuthi ngemuva kwalokho womise isikhumba kahle ukuze usigunde kangcono kakhulu.
Lapho uthambisa amakhwapha akho, gwema ukusebenzisa isiqedaphunga ngemuva kokugcwala ngoba uzocasula indawo. Esikhundleni salokho, sebenzisa ijeli le-aloe vera ukunciphisa ukucasuka.
Ukunciphisa izinhlungu lapho ukha amashiya akho,, gcoba umkhuhlane omncane owomile imizuzwana embalwa eshiya ngalinye, bese ukumaka kahle umumo futhi ungawudluli, faka i-petroleum jelly encane bese uyikama ngaphambi kokugcwala. Ngale ndlela, bazothola kalula izinwele ofuna ukuzisusa. Ngemuva kokufaka i-wax, sula ngebhola likakotini elifakwe ku-aloe vera, ukugwema ukucasuka namanxeba.
Uma ufuna ukuba i-wax ingabi buhlungu, kepha hhayi ukwenza izinwele zakho ziqine, enye yezinketho ezinhle kakhulu ukususwa kwezinwele ngokhilimu owonakalisayo. Zisebenza kahle ukususa izinwele ngesikhathi amasonto ambalwa ngaphandle kobuhlungu futhi ngaphandle kokuthi kube nzima.
Enye yezinto ezibuhlungu kakhulu ngemuva kokufakwa i-wax yi- izinwele ezifakiwe. Kungabonakala noma yikuphi emzimbeni esiwuthambile. Kwenzeka ngoba kwesinye isikhathi i- izinwele azinamandla anele okuphuma, ngakho-ke ihlala engxenyeni engezansi yesikhumba. Ukuze ungasebenzisi i-pin ejwayelekile ukuyisusa, kubalulekile ukuthi ukhethe uhlobo lokususa izinwele olukhethayo, njalo ngaphambi kokufaka i-wax. khipha isikhumba kahle ngomkhiqizo okhipha noma ngesipanji esinomphumela ofanayo. Faka noma yikuphi kwalokhu okukhethwa kukho kanye ngesonto, ngaphansi kweshawa futhi uzovalelisa izinwele ezifakiwe.
Khetha ukususwa kwezinwele okufanela kakhulu uhlobo lwesikhumba nezinwele zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Amathiphu wokufaka i-wax okungenabuhlungu
Amakha, kungani kubaluleke kangaka?
Ikhanda elihle kakhulu labesilisa